Kusuka kwi-MD's Desk | Uhlangabezana no-Odisha Tours & Travels
I-Namaskaar! Futhi Ukubingelela okuvela ezweni leNkosi Jagannath ...
IBhubaneswar - umuzi wamathempeli; inhloko-dolobha ka-Odisha yizwe lami. U-Odisha, ocebile ngamagugu amasiko, ifa lomklamo kanye namagugu efihliwe kwenzeka njengomoya waseNdiya. Amathempeli amahle, izimpawu zomfanekiso ezivelele, iziqhingi ezithandekayo, izindawo zokuhlala zasendle zasemakhaya nezilwane ezifuywayo, izidalwa ezinamafuba ezifudukayo echibini laseChilika zivakashela izivakashi eziningi njalo.
Ngangibheke kakhulu kunenkinga yami yobuntwana nezinkinga. Lokhu kwangishukumisela ukuba ngithuthukise le mboni futhi ngiphenye ukufinyeleleka okugcwele kwezinga elingabakhuthaza ngempela i-holidayer noma ukuhlangana kwezivakashi. Leyo yindlela lapho "I-Dream Child" Yami Ye-Pebbles Tour 'n' Travels (I) Pvt Ltd ifika khona ukubonakala.
Ngokuhlangenwe nakho kwami ​​nokubandakanyeka kulo mboni, nginakho ikhono lokuhlanganisa iqembu labasebenzi abalungiselele kakhulu nabanolwazi abazohamba kahle ngaphezu kwesibopho sabo esiseduze ukuze banikeze izivakashi zethu ithuba elihle kakhulu lokuhamba. Namuhla sesisakaze amaphiko ethu siye eNew Delhi naseKolkata futhi sisebenza emazingeni ahlukahlukene e-India ngenhloso enhle ngosizo loMnyango Wezokuvakasha, uHulumeni We-Odisha noHulumeni waseNdiya.
Yonke engcono kunazo zonke futhi ngilindele ukukwamukela ku-Odisha